Ireo fanambarana tamin'ny taona 2003 | SEFAFI
Ireo fanambarana tamin'ny taona 2003
Vato misakana ho amin'ny demokrasia : ronono antavy sy kolikoly
Natambatra ao anaty firaiketana iray voalohany navoaka tamin’ny septembra 2002, mitondra ny lohateny « Zo ara-pahalalahan’ny olom-pirenena, ireo lesona notsoahina tamin’ny krizy », ny fanambarana navoakan’ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena) dia manamarina ireo fambara mialoha ny krizy. Eo anatrehan’ny fihoaram-pefy ataon’ny fitondrana dia nanompanany eritreriny amin’i...
Kolikoly eny amin'ny faritra ambanivohitra
Adidin’ny sampan-draharaham-panjakana ny miasa tsara ho an’ny olom-pirenena, fa indrindra ny miaro azy eo amin’ny lafiny fiarahamonina sy fanjakana.
Ny ampahany maro amin’ny mponina anefa dia mipetraka lavitra ny tanàn-dehibe ary tsy dia raharahain’ny sampan-draharaham-panjakana loatra izany : filaminam-bahoaka, sora-piankohonana, fahasalamana, fanabeazana. Lavitra ny fanaraha-maso tokony hataon’ny Fanjakana ny tantsaha ka voatery manao fanomezana na manolotra vol...
Fanindrahindrana ny kolikoly
Feno azy ny haino aman-jery, ary miresaka azy koa ny olon-drehetra : sahala amin’ireo resaka mahaliana andavanandro dia mitana ny toerana voalohany mendrika azy ny kolikoly.
Tokony ho raharahan’ny besinimaro ny ady amin’ny kolikoly sy an’ireo mpiasam-panjakana lazaina ho tompon’andraikitra amin’izany koa. Mitoetra hatrany anefa ireto fanontaniana roa lehibe ireto : inona no tokony hatao ary iza no tokony hatonina ?
Araka ny voalazan’ny rakibolana Larousse, n...
Ahoana no fomba hiadiana amin'ny kolikoly ?
Natao ho laharam-pahamehana eto amin’ny firenena ny ady amin’ny kolikoly noho izy io vato misakana lehibe manoha ny fampandrosoana. Mahafatra-po tokoa izany finiavan’i Madagasikara izany satria ny firenentsika no anisan’ireo firenena tena voan’izany aretina mikiky ny fiaraha-monina izany.
Mba hahafahana miady bebe kokoa amin’ny kolikoly àry dia notapahin’ny Filoham-pirenena fa atsangana ny Filan-kevitra Ambony momba ny Ady amin’ny Kolikoly (FAAK) Rafitra miankina...
Famerenana indray ny fahalalahana hanao fivoriana sy fihetsiketsehana
Eo am-panarahana fatratra ny zava- misy ankehitriny eto amin’ny firenena dia heverin’ny SeFaFi fa ilaina ny mampahatsiahy ny hevitra fototra ampiharina mikasika ny fivoriana sy ny fihetsiketsehana azon’ny rehetra atrehina.
Fahalalahana hanao fivoriana sy fahalalahana hanao fihetsiketsehana
Anisan’ny fahalalahana fototra ary iantohana ao anaty Firenena anjakan’ny safidim-bahoaka ny fahalalahana hanao fivoriana sy fihetsiketsehana. Neken’ny firenena rehetra...
Fanjakam-bahoaka anomezana vahana ny miaramila
Tsikaritra, tato anatin’ny folo taona faramparany izao, fa nomena vahana aoka izany ny miaramila teo amin’ny fiainam-pirenena aty amin’ny tany an-dalam-pandrosona, indrindra taty amin’ny kaontinanta afrikanina. Tsy nivaona tamin’izany fiovana ara-politika izany i Madagasikara.
Nahitana indrindra an’izany fisehoan-javatra izany taorian’ny nanonganan’ny sasany tamin’ny alalan’ny hery ny fitondrana ara-dalàna napetraka tamin’ny toerany taorian’ny nahazoan’ireo fire...
Demokrasia sy fisoloan-tena
Mitarika fanontaniana maro ny fivoaran’ny politikam-pirenena tato ho ato. Anisan’ny hodinihin’ny SeFaFi amin’ireny ny olana ateraky ny fisoloan-tena izay efa nokirakirainy tao amin’ny Fanambarana tamin’ny 13 Novambra 20011. I - Ny solombavambahoaka, solontenan’ny vahoaka ?
Ny fifidianana solombavambahoaka farany teo dia nahitana ny fandresena miezinezina ho an’ny antokon’ny Filoham-pirenena (toerana 102) sy ireo mpiara-dia aminy (toerana 23) amin’ny tot...